Kedu ihe dị mma backlinks maka SEO?
Business ụlọ ahịa bụ ezigbo asọmpi n'ịntanetị ebe ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ndị kachasị nwee aha ọma nwere ohere ịkwado elu na SERP. Otú ọ dị, ndị na-ere ahịa n'otu n'otu nwekwara ike ịlụ ọgụ maka ndu. Iji chọpụta ndị ahịa gị kachasị ahịa ahịa, ị ghaghị ịmepụta saịtị gị na onye ọrụ n'uche na ebuli ya dị ka iwu ọchụchọ engine - el grafico de hoy nota roja. Isi ihe kachasị nke mgbasa ozi kachasị mma bụ njikọ njikọ. Ụlọ ọrụ njikọ bụ usoro nke ịmepụta njikọ sitere na isi ihe nchọgharị weebụ. Ọ bụ akụkụ nke usoro nchịkọta njedebe site na ebe ọ dị mkpa ka a rụchaa mgbe nrụrụ gị niile na-agbanwe. Backlinks enyere aka na-eto eto okporo ụzọ weebụsaịtị ma na-amụba ikike ikike. Otú ọ dị, dịka m kwuru na mbụ, iji bụrụ onye ndú n'ọrị ahịa ụlọ ahịa na-achọ oge na itinye ego. Ọ bụ ya mere ị ga-eji dị njikere ka usoro nke ị nweta njikọ dị mma nke na-abata ga-esi ike ma na-ewe oge. Ọzọkwa, ị ga-achọ ịma ebe ị ga - esi nweta ezigbo backlinks maka SEO. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ala ụlọ SEO nke nwere ike ime ka ụlọ ọrụ njikọ gị dị mfe ma mee ka mgbalị SEO gị.
Isi ihe dị mma backlinks maka ezigbo ụlọ SEO
Real estate SEO backlinks generating is a process of getting links to your website from sites other relevant. Ahịa dijitalụ na-eje ozi dị ka asọmpi ochie na-ewu ewu na ebe ndị na-etinye ọnụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu (votes backlinks) nweta ọkwa kacha elu. Ụdị ahịa ahịa niile nke Google dabeere na ndị na-enye nyocha ozi kachasị mma na ozi dị mkpa. Nanị ụzọ isi chee na ihe a na-ewu ewu bụ iji gụọ ọnụọgụ niile na-abata na ọdịnaya a na ọnụ ọgụgụ nke mbak na njikọ ya kwesịrị. Dị ka ọmụmaatụ, netwọk mmekọrịta mmadụ na Facebook nwere ihe ndabere 32,348,008,110 backlinks. Ọ bụ onye ndú zuru oke na SERP site na ọnụ ọgụgụ ajụjụ dịka ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ maka ya maka akwụkwọ weebụ dị ikikere.
Otú o sina dị, n'eziokwu, ọ bụrụ na ọ bụghị ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ewu ma dị warara, ị nwetaghachi backlinks nwere ike ịbụ nsogbu. Ọzọkwa, ọ bụghị ihe niile backlinks na-kere hà, na ụfọdụ n'ime ha nwere ike ime ka ezigbo ụlọ ahịa gị website karịa ọjọọ karịa akara ngosi. Google bụ onye maara ihe ma nwee ike ịmata ọdịiche dị n'agbata spammy na ikikere na-abata njikọ. Bots Google na-enyocha ọ bụghị nanị na mkpa nke ọdịnaya ebe e debere njikọ ma nwee aha ọma nke weebụsaịtị nke ha si abịa.
Ọ bụ ya mere na n'isiokwu a ka m ga-ekwu maka naanị ihe gbasara ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịnweta ogo backlinks gị na saịtị gị.
Njikọ na-abata site na ndị mmekọ azụmahịa gị
Akụkụ dị mkpa nke usoro a dabere na inye ọnụ ọgụgụ ego nke uru n'ihu n'ihu ndị ọzọ na-azụ ahịa. Dị ka ọmụmaatụ, ịnwere ike inye ndị mmadụ uru na listi email gị site n'inye ha nsọneti na ụlọ ọrụ ndị ị na-esonyere. Akụkụ nke mgbanwe n'etiti azụmahịa gị kwesịrị ịgụnye backlink gị na saịtị gị ezigbo ụlọ ahịa. Site na ime nke a, ị na-eme ka mmekọrịta gị na ndị mmekọ gị nwee mmekọrịta bara uru ma nweta mma njikọ njikọ gị na saịtị. Ndị mmekọ azụmahịa gị nwere ike ịgụnye isiokwu na njikọ na-abịa site na saịtị dabere na obodo gị. Ọ ga-etinye aka na saịtị gị SEO.
Nye ihe nrịba ama maka ezigbo ụlọ SEO backlinks
Nnyocha nyocha ọchụchọ dị mfe ga-enye gị ndepụta nke weebụsaịtị ndị nwere ntolite na ha ụlọ ọrụ gị. Imirikiti ihe ndị a sitere na ebe nrụọrụ weebụ na-esonyere onye hapụrụ nyochaa. Ọ bụrụ na ịnweghi ibe dị ka nke a, chee echiche ka ịmepụta otu ma gwa ndị mmadụ ka ha hapụ nyocha ha n'ebe ahụ. Ọ ga - enyere gị aka inweta akara azụ azụ dị mkpa karị ma bulie ikike gị na Google.